Wajiga waddaniga - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Wajiga waddaniga
Waddaniyaddu waa iimaan ku kordha wanaaga uu muwaadinku dalkiisa iyo dadkiisa u sameeyo, halka ay ku nusqaanto dhibaatooyinka qofku u geysto dalkiisa iyo dadkiisa.Qofkasta oo dalkeenan Soomaliya habeen wanaag u qabtay waxa uu leeyahay Iimaan waddaniyeed, halka mid kastoo dhibaato si’ un u gaadhsiiyey dalkeenan uu Iimaankiisa waddaniyeed hoos u dhac ku yimid.
Raggan aad uga jeedaan Sawirka waa 3dex sarkaal oo kawada tirsan Ciidanka Booliska Soomaliyeed, mudanna in magacooda lagu daabaco laabaha da’yarta soo kacaysa, waa Waddaniyiin nool oo looga tusaalaysan-karo nooca waddaniyad ee la rabo in lala yimaado, waxay naftoodii iyo maalkoodiiba u hureen badbaadinta hantidii qaranka ee taalay 3dex rug oo qarankan macno weyn uga fadhiya ; wax ba yaan hadalka badine aan idin baro intiina aan aqoon:-Bidix ka bilow, ninka direeska caddayska ah watta, waa Gaashaanle Cabdi Maxamed Samatar (Cabdi dheere) oo ahaa badbaadiyihii hantidii taalay Wasaaradda arimaha dibadda, wuxuu tan iyo burburkii gaadh ka hayay waraaqihii iyo sirtii qarankan uu dhitaysanayay tan iyo maalinkii warqad dawladnimo oo arima dibadeed la qorey Soomaliya; Axyaa waddani.
Ninka go’a shaalka ah watta, waa G/Sare Jaamac Cilmi Timir, waa xafidihii iyo ilaaliyihii kaydkii Booliska qaranka Soomaliyeed oo ay yaal-liin dhammaan wixii waraaq Boolis ku saabsan ee la qorey tan iyo 1930meeyadii, waxaa kale oo yaalay dhammaan sidii derajooyinka ciidanka Boolisku u baxeen waxaa yaala waxkastoo ku saabsan Booliskeena sharafta mudan; Axya waddani.
Ninka direeska buluugga ah watta, waa G/Sare Abshir Haashi Cali, waa ninkii ku mitidey in hal cajilad laga bililiqaysto kaydkii Heesaha iyo wararka Radio Muqdisho, wuxuu ummadda Soomaaliyeed u badbaadiyey Sooyaal ay adkeyd meel laga soo heli lahaa; Axyaa waddani.Nimankani waxay awoodeen inay isaga tagaan hantidan sidii dadka oo dhan uga wada tageen amaba ay laftoodu bililiqaytaan hantidan balse IIMAANKOODA WADDANIYEED ayaa u diidey inay sidaa sameeyan farayna inay badbaadiyaan hantida qaranka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa min hala derajo dallacsiiyey saraakiishan guddoonsiiyeyna biladda u sarraysa dalka ee HALYEY QARAN. XAMAR kaliya ma joogaan dad dalka dhib u geystay waxaa kaloo jooga RAG dalkan wax weyn taray.
WQ/ Caawiye Indho-taag
Previous articleAskar ka tirsan Afghanistan oo ka baxsaday dagaalka ay kula jiraan Taliban
Next article60 sano kadib maxaa inaga lumay maxaa se inoo kordhay?